Momba anay - Shenzhen Yuxingyuan Gift Packaging Co., Ltd.
Shenzhen Yuxingyuan Gift Packaging Co., Ltd. dia orinasa fanontana sy fonosana matihanina manambatra endrika, fanontana ary fanodinana aorian'ny asa. Manokana amin'ny fanaovana pirinty ny karazan-boatina fonosana rehetra, boaty miloko, boaty karatra, karatra loko, rakikira dokam-barotra, tag, boky torolàlana, kitapo taratasy, taratasy fametaka, takelaka fametahana tatoazy, rakipeon-tsary, boaty firavaka, boaty fivarotana, boaty fanomezana ary zavatra hafa vita pirinty akora. Ny orinasa dia mandray hatrany ny fampandrosoana ny haitao maoderina maoderina fanaovana pirinty ho làlan'ny fampandrosoana, manaraka ny fotoana ary manaraka ny fampahalalana momba ny indostrian'ny fanontana ankehitriny. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia manana milina fanontam-pirinty Heidelberg sy Komori mandroso efatra, miloko enina, enina miloko manerantany, ary ny fananganana farany ny mpanonta pirinty KBA misokatra any Taiwan dia afaka mamaly tanteraka ny famokarana lehibe, salantsalany ary kely. boaty, ary koa ireo fitaovana fanodinana mialoha, fanaovan-pirinty ary fanodinam-pahefana mandroso hihaona amin'ny fanatsarana hatrany ny kalitaon'ny mpanjifa sy ny Claim service.
Hatramin'ny niorenany, ny orinasa dia nifikitra tamin'ny filozofia momba ny "fanavaozana, fahombiazana, kalitao, serivisy", fitaovana fanontana mandroso, haavo teknika matihanina, ary fanodinana ambany tanteraka hanomezana mpanjifa vokatra sy serivisy fanaovana pirinty avo lenta. Ny rehetra dia tongasoa hitsidika sy hitarika! Vonona hiara-hiasa aminao hamorona rahampitso tsaratsara kokoa.
Manohiza manavao, mandroso mialoha, mihoatra ny tenantsika ary mihalehibe sy mihamatanjaka. Mankasitraka hatrany ary tanteraho ny andraikitra ara-tsosialy. Miezaha mitady vokatra tsara ary avereno ny mpanjifa sy ny mpampiasa vola.
Ho an'ny mpanjifa, izahay dia miaro ny tombotsoan'ny tsirairay ary mikatsaka fampandrosoana iraisana amin'ny fiaraha-miasa. Ho an'ireo mpiara-dia dia miady amin'ny fifaninanana izahay hampiroborobo ny fiaraha-miasa ary hanangana eritreritra handresy. Ho an'ny mpiasa dia amporisiho ny mpiasa hiara-hitombo amin'ny orinasa. Ho an'ny fiarahamonina, hazavao ny fiaraha-miaina mirindra ny orinasa sy ny fiaraha-monina.
Ny fanahintsika dia mitady ny fanovana hevitra, hevitra vaovao, fepetra azo tanterahina ary fanatsarana ny asa. Mandrosoa miaraka amin'ny fotoana, araraoty ny fotoana mety, ampifanaraho ny fepetra amin'ny toe-javatra misy eo an-toerana, ary manaova fanavaozana rehefa miova。
Raiso ny toe-javatra ankapobeny, diniho ny antsipiriany, katsaho ny fahalavorariana ary asehoy ny hatsaran-tarehinao.
Ny Shenzhen Yuxingyuan Gift Packaging Co., Ltd. dia manaraka ny politikan'ny "fandraisana anjara feno, fanatsarana tsy tapaka, ary fanatanterahana ny fampanantenan'ny mpanjifa rehetra", ary nametraka rafi-pitokisana sy kalitao feno ary rafitra rafitra serivisy fanampiny. Mianara am-pahamendrehana ny asan'ny rakikira sary, pejy miloko, magazine, afisy, bokin'ny vokatra, boaty firavaka mahafinaritra, kitapo taratasy mahafinaritra, boaty miloko fonosana, boaty fanomezana mahafinaritra, kahie tsara tarehy, sticker, stikeran'ny tatoazy, sns mifanaraka amin'ny foto-kevitra momba ny serivisy ny "tso-po", "fahatokisana", "hafanam-po", "kalitao" ary "fahombiazana", ny fitantanana hevitra ny fikatsahana ny hatsarana, kalitao aloha, miorina amin'ny fototra, fampandrosoana vaovao, miankina amin'ny fitantanana siantifika sy ny fitaovana mandroso, Teknolojia Superb, avo -Ny serivisy fitondra-tena, nahazo ny fanekena mpanjifa marobe, nahazo laza malaza sy fahatokisana.
Mino hatrany ny orinasa fa "ny kalitao no ain'ny vokatra, ary ny fahatokisana no vato fehizoron'ny orinasa". Hamorona sary tonga lafatra amin'ny fahafaham-po ny mpanjifa amin'ny serivisy kilasy voalohany, fitantanana kilasy voalohany ary kalitao kilasy voalohany izahay ary hampihatra ny fahatsiarovan-tena amin'ny kalitaon'ny serivisy fanontam-pirinty iray manontolo, hahazo ny fahatokisana sy ny fanohanan'ny mpanjifa amin'ny fahamendrehana, ary mamorona rahampitso tsara kokoa miaraka amin'ny mpanjifa. Miarahaba am-pahatsorana ny olona amin'ny fari-piainana rehetra hitsidika sy hiara-miasa!